Hadda waxaa laga heli karaa iOS 13.2.2 iyo iPadOS 13.2.2 oo saxaya dhibaatada daboolida iyo xirida codsiyada | Wararka IPhone
Hadda waxaa laga heli karaa macruufka 13.2.2 iyo iPadOS 13.2.2 sixitaanka dhibaatada daboolida iyo xiritaanka codsiyada
Toddobaadyadii la soo dhaafay, wax badan baa laga yiri shaqo deg deg ah oo ay iOS ku qabanayso codsiyada xiritaanka asalka si kadis ah, labadaba iPhone iyo iPad. Laga soo bilaabo Apple kama aysan hadlin arintaan waqti kasta, laakiin waxay garawsadeen in tani ay dhaceyso tan iyo markii ay hada soo saareen cusbooneysiin, cusbooneysiin diiradda saareysa xalinta dhibaatadan.
Cusboonaysiintaan cusub Hadda waxaa loo heli karaa labada iPhone iyo iPad, iyagoo ah nambarka lambarka 13.2.2 labada xaaladoodba. Cusboonaysiintaan cusubi ma aha oo kaliya inay diirada saarto xalinta dhibaatooyinka xirnaanshaha lama filaanka ah ee iOS 13, laakiin ragga ka socda Cupertino waxay ka faa'iideysteen dhibaatooyinka caymiska ee dadka isticmaala qaarkood soo mareen.
Haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala ee had iyo goor dhibaatooyinka ku qaba caymiskaaga iPhone-ka, dhibaatooyinka la xidhiidha kiisaska badankood Movistar, waa inaysan waqti dheer qaadan in la cusbooneysiiyo terminaalkaaga si loo arko haddii cusbooneysiintan ay dhab ahaantii xallineyso dhibaatada.
Dhibaatada xirida codsiyada, dhibaato kale taas wuxuu saameeyaa dhammaan isticmaaleyaasha, Waxay sidoo kale u muuqataa in lagu hagaajiyay cusbooneysiintan. Haddii Apple ay ku sii socoto sicirkan cusbooneysiinta Apple waxay imaan doontaa iOS 14 ka hor intaan la bilaabin.
Maxaa ku cusub nooca iOS 13.2.2 / iPasOS 13.2.2
Wuxuu hagaajiyaa arin sababi karta barnaamijyadu inay si lama filaan ah u joojiyaan markay ku shaqeynayaan asalka.
Nooca loogu talagalay iPhone sidoo kale wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka caymiska ee adeegsadayaasha qaar ay la kulmayeen ka dib markii la sii daayay casriyaynta ugu dambeysay.
Waxay wax ka qabataa arrin sababtay jawaabaha iimaylka ee S / MIME ee loo adeegsado xisaabaadka isweydaarsiga inay noqdaan kuwo aan la akhrin karin.
Xalliyay arrin sababi karta adeegsiga adeegga hal-ku-gal ee Kerberos ee Safari si ay u muujiso deg deg xaqiijin
Waxay hagaajineysaa arrin sababi karta lacag ku soo rogista YubiKey oo leh qalabka hillaaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Hadda waxaa laga heli karaa macruufka 13.2.2 iyo iPadOS 13.2.2 sixitaanka dhibaatada daboolida iyo xiritaanka codsiyada
Subaxaan waxaan cusbooneysiiyay 13.2.2 waxaanan lumiyay ogeysiisyada barnaamijyada qaar, maahan dhammaantood, laakiin qaar, inkasta oo la howlgeliyo, uma muuqdaan
Ma aqaano haddii ay wax ku yeelan doonto nooca cusub
Waa rasmi: Disney + waxay imaan doontaa Spain 31ka Maarso, 2020
DxOMark wuxuu ka tagayaa kamaradda iPhone 11 Pro booska saddexaad